Uyidlala njani iNqanaba lePentatonic kwiGuitar: Ipateni 1
Eyona ndlela ilula yokwazi isikali sepentatonic kwikatala kukuqala ukusebenza kwisitshixo se-E encinci, kuba isebenzisa yonke imitya evulekileyo kwikatala kwaye ixhaphake kakhulu kumculo othandwayo. Isikali esincinci se-pentatonic siqukethe amanqaku E-G-A-B-D. Nazi zonke izinto ezenzekayo ezi manqaku kwibhodi ye fretboard.
Ewe! Kubonakala kudideka, akunjalo? Sukuba nexhala. Ukwenza isikali sepentatonic sifikeleleke ngakumbi, qala ngepateni 1.
Iziseko zepateni 1
Ipateni yePentatonic 1 inawo onke amanqanaba esikali kuyo yonke imitya ehambelana phakathi kwemitya evulekileyo kunye nefret 3rd. Izangqa kwicala lasekhohlo zimele iintambo ezivulekileyo, ozidlalayo ngaphandle kwesandla sasekhohlo. Amanqaku kwi-2 kunye ne-3 ye-frets kufuneka abhalwe ngomnwe.
Uziqhelanisa njani nepateni yoku-1 unyuke usihla kwisikali
Landela iithebhu eboniswe apha ukuze udlale ngale patent yesikali sepentatonic ngokunyuka nokuhla kwefashoni.
Xa udlala isikali (ukunyuka), uqala ngenqaku elisezantsi kwaye uye kwinqaku elilandelayo eliphezulu kwelizwi. Xa udlala ezantsi isikali (esihla), uqala ngenqaku elilelona liphezulu kwaye emva koko uye kwinowuthi elandelayo ephantsi kwinqanaba.
Qaphela ukuba xa udlala isikali, uqala ngentambo evulekileyo kwaye uyilandele ngenqaku elikhathazayo. Ngokwahlukileyo, xa udlala ezantsi isikali, uqala ngenqaku elikhathazayo kwaye ulilandele ngentambo evulekileyo.
Sebenzisa ividiyo yePatatonic Scale Patterns ukuva kwaye ubone indlela yokudlala phezulu naphantsi kweepatatonic scale patterns. Ividiyo ikwabonisa indlela yomnwe kunye nokudibanisa iipateni zepentatonic.
Indlela ngomnwe kwaye ukhethe isikali
Nguwuphi umnwe owusebenzisayo ngumbandela wokukhetha. Nangona kunjalo, nge-pentatonic pattern 1 kwindawo evulekileyo, kuyacetyiswa ukuba usebenzise umnwe wakho we-2 ukukhathaza onke amanqaku kwi-fret ye-3 kunye nomnwe wakho we-1 ukukhathaza onke amanqaku kwi-fret yesi-2. Awunyanzelekanga ukuba ulandele lo mthetho ngalo lonke ixesha, kodwa yindlela elungileyo yokuqalisa.
Ukuya kufikelela kwisandla sakho sasekunene, uninzi lwabadlali bekatala badlala izikali besebenzisa ipiki, nangona abanye besebenzisa iminwe yabo (eli nyathelo libizwa ngokuba ukucofa ngomnwe okanye isitayile somnwe ). Kuyacetyiswa ukuba usebenzise ipiki ngaphandle kokuba uzibophelele ngokupheleleyo ekubeni ngumdlali wohlobo lomnwe njengoChet Atkins okanye uMark Knopfler. Sebenzisa ipiki kulula ukuyenza kunokukhulisa ubuchule bokuchonga umnwe okuyimfuneko ukuze udlale izikali kakuhle.
Njengoko usebenzisa ikatala yakho, zama ukutshintshisa imivimbo kwinqaku ngalinye. Ngamanye amagama, dlala inqaku lokuqala nge-downstroke, inqaku lesibini nge-upstroke, inqaku lesithathu nge-downstroke, njalo njalo. (Ukuba ukhetha ukungasebenzisi ipiki, emva koko tshintsha iminwe yakho yoku-1 neyesi-2 okanye umnwe wakho wokuqala nobhontsi kwisandla sakho sasekunene.)
Ukutshintsha ukukhetha kwakho okanye iminwe akuyimfuneko ngeli xesha, kodwa sisakhono ekugqibeleni ekufuneka usiphuhlisile ukuze udlale ngokufanelekileyo kwaye uhambisane nesantya seengoma ezininzi.
Iingoma ezibonisa amanqaku epateni 1 kwi-E pentatonic encinci kwindawo yokuqala zibandakanya
Buyela eMnyama nge-AC / DC
USusie Q ngoCreedence Clearwater Ukuvuselela
Ikhaya elimnandi laseAlabama nguLynyrd Skynyrd
Ndinqwenela ukuba ubelapha ngu-Pink Floyd
yintoni ibhokisi yokuwa
ukutya okunokuphetshwa xa uthatha i-amoxicillin
uyivula njani iakhawunti entsha ye-gmail
Iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide kwiklonopin